Tsy orin’asa vahiny velively ny OMAVET | Ny Valosoa Vaovao
Tsy orin’asa vahiny velively ny OMAVET
Resabe ny mikasika ny OMAVET hanaovana ny contre visite ny TAXI sy TAXIBE eto Antananarivo. Ny mahasoa ny vahoaka no katsahina ary ny fiharovana ny ainy ary tsy mihemotra amin’ny fanapahan-keviny ny CUA. Orin’asa efa tamin’ny 1996 ny OMAVET na MIKOJA teo aloha no niaraka niasa tamin’ny CUA. Manana petrabola 99.96% ao ny kaominina Antananarivo Renivohitra fa tsy orin’asa vahiny izany ny OMAVET. Manazava ny kolonely Ramboasalama Emilien, lefitra faha 2 ny Ben’ny tanana